सिमा विवादको बिषयमा सरकारले छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
By administrator on	 May 9, 2020 BREAKING NEWS, देश, फोटो फिचर, राजनीति, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
गैंडाकोट , बैशाख २७
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेकोे कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गर्नुभएको थियो । भारतले पटक–पटक नेपाली सिमा मिच्दै आएको भन्दै यसको विरोध भईरहेको छ । यसैसन्र्दभमा नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसँग सिमाविवादका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, संवाददाता माया कंडेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
मन्त्रीज्यु विजय एफएममा तपाइलाई स्वागत छ ।
यो महामारीको समयमा पनि भारतले बाटो विस्तार गर्नुलाई कसरी लिनुभएकोे छ ?
यो समाचार आईसकेपछि हामी पनि गम्भीर भएका छौं यहाँलाई थाहा नै छ । त्यो क्षेत्रको सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा कुटनीतिक माध्यमबाट राखीसकेको छ । भारत स्वयम्ले पनि त्यो नसल्टिएको समस्या अथवा पेन्डिङ ईस्यु भनेर भनिरहेको र त्यसको समाधानका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको संयन्त्रले टुङ्गाउने भनेर आँफै स्विकार गरेको विषय हामीले यसमा भारतले नयाँ नक्सा भनेर ति क्षेत्रहरु समेटेर नक्सा जारी गरिसकेपछि हामीले त्यसमा आपत्ती जनाईसकेको अवस्थामा सिंगो देश विश्व नै कोरोनाको विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा भएको घटनाबाट हामी आश्चर्यचकित पनि भएका छौं । मैले दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासबाट सबै विस्तृत विवरणहरु मगाएको छु । त्यो रिपोर्ट आईसकेपछि सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ ।
लिपुलेकलाइ ब्यापारीक मार्गको रुपमा बिस्तार गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर हँुदा पनि नेपाललाई जानकारी पनि गराइएन । यसमा चिनको पनि मौन समर्थन हो ? नेपाल साच्चै बोल्न नसकेकै हो ?
उहाँहरुले सन २०१५ मा एक वक्तव्य मार्फत त्यो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने निर्णय गरिसकेपछि त्यति बेला नै नेपाल सरकारले आपत्ती जनाएको हो । त्यो कुरालाई हामीले लगातार दुई पक्षिय भेटहरुमा अनि अरु मञ्चहरुमा पनि ति विषय उठाउँदै गरेका छौं । त्यस सम्बन्धि नेपाल सरकारले पहिले नै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
सुगौली सन्धी अनुसार पनि नेपाली भुमी हो, तर बेलाबेलामा यस्तो विवाद किन आइरहन्छ ?
नहुनु पर्ने हो । वास्तवमा नेपालको दावा प्रष्ट छ । हामी अरु देशको भुभागमा दावा प्रस्तुत गरेका छैनौं । ईतिहास, तथ्य प्रमाणले अगाडी सारेका कुरालाई यि बिषयहरु भनेका हौं । त्यसले जे भएको छ त्यो उचित भएको छैनै । तर पनि मैले यहाँलाई भनीहाले सरकारको तर्फबाट आधिकारिक दृष्ट्रिकोण छिट्टै सार्वजनिक गर्छौ ।
कुराकानीका लागि धन्यवाद् ।
तपाईलाई पनि धन्यवाद छ ।